Wararka Maanta: Sabti, Jun 9 , 2018-Al-shabaab oo dilay Askari Mareykan ah Afar kalana dhaawacay
Sabti, June, 09, 2018 (HOL) –Xooggag Al-shabaab ayaa la sheegay in ay weerar ku dileel askari Maraykan ah, sidoo kale waxaa weerarkaasi la sheegay in ay ku dhaawacmeen ilaa Afar kale oo askari oo Mareykan ah.
Wararku waxaa ay intaa ku darayaan in ciidamadan la bartilmaameedsaday wadeen howlgal ay ku gacan siinayaan ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda al Shabaab.
Gaar ahaan weerarkan ayaa ka dhacay meel aan wax badan ka fogeyn deegaanka Sanguuni ee Koonfurta Soomaaliya.
Dhimashada Askarigan iyo dhaawaca Afarta kale waxaa xaqiijiyay sarkaal ka tirsan milatariga Maraykanka.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in Al-shabaab ay dhowr qarax la beegsadeen ciidamada Soomaalida iyo Maraykanka ee wada socday kadibna ay rasaas xoog badan ku fureen.
Al-shabaab ayaa kordhiyay weeraradda ay qaadayaan tan iyo bilawga bisha Ramadaan iyaga oo sheegtay weerro badan oo xidhdiidh ah oo ka dhacay gobolo kala duwan.